Mpamatsy serivisy sy orinasa | Mpanamboatra serivisy any Shina
Dongguan Enuo Mould Co., Ltd. dia sampana iray an'ny Hong Kong BHD Group, ny famolavolana lasitra plastika sy ny famokarana no orinasan-dry zareo. Ankoatr'izay, ny ampahany amin'ny metaly cnc machining, ny vokatra prototype R&D, ny fitaovana fanaraha-maso / ny fanamafisana R&D, ny famolavolana vokatra plastika, ny famafazana ary ny fivondronana.
Manome serivisy famoronana isan-karazany izahay
Bobongolo Enuo afaka manome mpanjifa serivisy fanodinana tokana ho an'ny famolavolana ny vy, ny famokarana ary ny fitsaboana ambonin'ny tany. Ny orinasa dia nanangona traikefa manan-karena amin'ny fanodinana ny vy sy ny tranga fitsaboana an-tany an-taonany. Ny orinasa dia manana fitaovana fikirakirana avo lenta izay avy any an-toerana sy any ivelany (Sodick CNC, EDM), miaraka amin'ny fitaovana fandrefesana CMM-system Si Rui PC-system CMM hanomezana ny mpanjifafametrahana mazava tsara faritra CNC fikosoham-bary ...
Bobongolo Enuodia nanome refy fandrefesana, fametahana fanohanana CMM ary famokarana fivoriambe mandritra ny taona maro amin'ny famokarana bobongolo sy ny varotra. Ny haben'ny jigs fanaraha-maso dia manarona fonon'ny fiara sy ny faritra haingon-trano anatiny / ivelany.Sombin-javatra vita amin'ny tsindrona,Auto jiro sy vy nohomboany faritra. Enuo Team dia miantehitra amin'ny ekipa miasa mahomby, fitaovana fanodinana / fandrefesana ary kalitao miorina tsara hanomezana hatrany ...
Bobongolo Enuo ny asa lehibe dia ny famolavolana sy ny famokarana lasitra plastika, ny velaran-tany misy antsika dia 2.000 metatra toradroa, izay fenoina milina fanodinana CNC, masinina EDM, milina fikosoham-bary, milina fitotoam-bary, fanandramana ary fitaovana hafa mihoatra ny 30 set, ary vondrona vondrona fivoriambe telo koa tafiditra ao. Ny lanjan'ny valizy amin'ny atrikasa 15 taonina, miaraka amin'ny seta 100 isan-taona, ary ny lanjan'ny bobongolo lehibe indrindra hatramin'ny 30 Tons.
Bobongolo Enuony asa lehibe dia ny famolavolana sy ny famokarana lasitra plastika, ny velaran-tany misy antsika dia 2.000 metatra toradroa, izay fenoina milina fanodinana CNC, masinina EDM, milina fikosoham-bary, milina fitotoam-bary, fanandramana ary fitaovana hafa mihoatra ny 30 set, ary vondrona vondrona fivoriambe telo koa tafiditra ao. Ny lanjan'ny valizy amin'ny atrikasa 15 taonina, miaraka amin'ny seta 100 isan-taona, ary ny lanjan'ny bobongolo lehibe indrindra hatramin'ny 30 Tons.
Ny bobongolo enuo dia mampiasa teknolojia fanontam-pirinty 3D na silika mba hanomezana mpanjifa serivisy mijanona iray toy ny fivoaran'ny vokatra haingana, famokarana maodely haingana, fampitaovana haingana ary famokarana betsaka. mampiasaPRO / E, SOLIDWORKS, MASTERCAM, AUTOCAD ary rindrambaiko hafa amin'ny vokatra anatiny Fanatsarana ny rafitra, ny famolavolana sns, manome ny mpanjifa fototra azo antoka amin'ny fampandrosoana ny vokatra vaovao, fitsapana ny tsena, varotra fampirantiana ary famokarana bobongolo.